Sida loo helo iPhone-kaaga marka uu aamusan yahay | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo helo iPhone kaaga marka uu damsan yahay
Sida loo helo iPhone kaaga marka uu damsan yahay
Kahor intaadan akhriyin inta ka hartay maqaalkan ku saabsan sida loo helo iPhone-kaaga, fiiri dhabarka fadhiga. Maya? OK, ka waran jeebka jaakadda aad maanta xidhatay? Wali maya? OK Akhriso.
Waxa laga yaabaa inay u ekaato waali inaad wax ka qorto sida loo helo iPhone kaaga. Ka dib oo dhan, qof kastaa wuu ogyahay Find My iPhone, sax? Hagaag, laga yaabee. Waad og tahay in loo isticmaali karo si loola socdo iPhone la xaday on khariidad, haddii perp uusan damin (kaas oo ay ku dhow yihiin in ay leeyihiin).
Laakiin ugu yaraan hal qoraa halkan at Cult of Mac ma ogayn in Find My iPhone sidoo kale waa weyn u helida iPhone aad gurigaaga. Qoraagaas - aan ugu yeerno Luke Dormehl si aan uga fogaado ceebta - wuxuu ku qaatay in ka badan hal saac inuu isku dayo inuu raadiyo iPhone-kiisa aamusan ka hor inta uusan adeegsan barnaamijka raadraaca ee Apple.
Dhibaatada: Sida loo helo iPhone aamusan
IPhone kaaga ayaa ka soo muuqan doona khariidada, waxaadna ku qasbi kartaa inuu ciyaaro digniin sare
IPhone kaaga meel laguma arko. Waad ogtahay inay guriga ku taal meel. Waxaad isticmaalaysay isla markaaba ka hor intaadan u dhalan koob shaah caano ah oo sippy ah, mana aadan dibadda u bixin tan iyo markaas. Runtii, waad waalan tahay inaadan la hadlin qof weyn maalinta oo dhan.
Markaa taleefoon kale soo qaado oo wac kaaga. Sug Taleefan kale ma haysatid. Xaaskaaga waxay ku maqan tahay adduunka dhabta ah, oo yaa haysta khadka taleefanka maalmahan? Ka sokow, aad iPhone lumay waa in hab aamusan, ama laga yaabaa xataa in hab maalinta oo dhan Ha dhibin, si ay u joojiyaan ogeysiisyada ka toosinta ilmaha marka uu ugu dambeyntii tagaa.
Haddaba maxaad qabataa? Ma weydiin kartid wiilkaaga dhallaanka ah waxa cadaabta uu ku sameeyay, sababtoo ah sida dhammaan dhallaanka wuxuu leeyahay da'da maskaxda ee ilmo 1 jir ah oo aan xitaa ku hadli karin Ingiriisiga.
Oo waxaad horay u eegtay dhabarka fadhiga.
Xalka: Isticmaal Raadi My iPhone
Jawaabtu waa Find My iPhone. Waxaad ku isticmaali kartaa Mac-gaaga, adoo ku qoraya iCloud.com, gal, oo isticmaalaya Find My iPhone browserka. Laakin way kuu fududdahay haddii aad haysato iPadka. Kaliya fur Soo hel barnaamijka My iPhone, oo sug in yar.
Raadi My iPhone xitaa wuxuu heli karaa AirPods-kayga.
Dhanka bidix waxaad arki doontaa liiska dhammaan aaladaha Apple ee hadda ku jira akoonkaaga iCloud. Ka hel iPhone-kaaga aamusan liiskaas, oo taabo. Aragtida khariidadda midigta ayaa soo jiidan doonta, taasoo tusinaysa matalaadda 3-D ee goobta iPhone-ka. Haddii ilmuhu aanu ka soo tuurin daaqadda, waa inuu weli yaallo gurigaaga. (Talada barbaarinta ee Lam. 1: Ha kaga tagin dhallaanka iswada keligood qolalka leh daaqadaha.)
Qeybta hoose ee guddigan waxaad arki doontaa saddex badhan. Taabo midka lagu calaamadiyay Cayaarta Sound. Haddii wax walba si fiican u socdaan, iPhone-ku wuxuu bilaabi doonaa inuu ciyaaro feejignaan sare. Tani waxay u dhawaaqi doontaa xitaa haddii iPhone lagu dejiyay inuu aamuso iyo/ama ku jiro qaabka Ha dhibin.
Codka ka soo baxaa waa mid aad u sarreeya oo laga maqli karo xitaa dhinaca kale ee aqalka - xitaa haddii iPhone uu ku hoos aasay barkimo. Waxay ku dhowdahay inay toosi doonto ilmaha, wiilkuna ma u qalmo, nacaska yar. Dabcan, way noqon doontaa aad yaa ku xanuunsada markaad isku daydo inaad hurdada ku celiso. Maxaad u rabtay inaad mar kale carruur dhasho?
Haddii wax walba si fiican u socdaan, waxaad la socon kartaa codka iPhone-kaaga qarsoon, dami codka, ka dibna nacaybka-akhrinta Facebook markaad isku daydo inaad dib u ruxdo ilmaha hurdada, taas oo noqon doonta mid aan suurtagal ahayn iyada oo ay ugu wacan tahay caffeine-ka ku jira shaaha aad quudisay. waa. ( Pro tilmaanta barbaarinta ee lambar 2: Ha siin shaaha dhallaanka, si kasta oo caano u yahay. Ma aha 1970-yadii Ingiriiska.)
Sida ugu dambeyntii loogu heli karo iMessages on Android
Quusidda 9-ka ugu Fiican ee Miisaska WordPress (marka la barbar dhigo)